काठमाडाैं । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले पार्टी एकता भाषण गरे जस्तो सजिलो नभएको बताएका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हरेकजसो ...
तस्बिरमा जहाज दुर्घटना (फोटो फिचर)
फाल्गुन १४, २०७२- शुक्रबार बिहान १२ बजेर १५ मिनेटमा नेपालगञ्जबाट जुम्लाका लागि उडेको काष्ठमण्डप एयरको ९एनए जेबी जहाज कालिकोटको चिलखाया गाविसमा दुर्घटना भएको छ । दुई दिनअघि तारा एयरको जहाज दुर्घटनाको खबरले मर्माहत बनाएकाबेला अर्को त्यस्तै दु:खद खबर सुन्नुपर्‍यो । दुर्घटनामा पाइलट र कोपाइलटको मृत्यु भएको छ । ९ जना यात्रु घाइते भएका छन् । दुर्घटनाका यी तस्बिरहरु कालिकोटका ...
आखिर को हुन यि ब्याक्ती रु जसलार्इ अख्तियारले पनि कार्वाही गर्न सकेन
काठमाण्डौं १४ फागुन । मुलुकमा एकजना यस्ता जब्बर व्यक्ति छन्, जो मुलुकको इन्धन आयात, बिक्री–वितरणको ठेक्का लिएर बसेका छन् । ती व्यक्ति हुन् – नेपाल आयल निगमका प्रवन्ध ...
के हो सामान्य यौन जीवन ? वास्तवमा हामीलाई कति सेक्स चाहिन्छ?
मानव यौन गतिबिधि जटिल भए पनि यसको सामना गर्नु जरुरी छ । सम्भवत खानाको स्वाद जस्तै सेक्सको पनि आसन र समय हुन्छ । सेक्सका समयमा साना तिना गल्ती भइरहन्छन् । हाम्रो खाना पकाउने स्वाद जस्तै हाम्रो यौन चाहना पनि देश अनुसार, व्यक्ति अनुसार र दिनै पिच्छे फरक/फरक हुन्छ । यही कारणले सामान्य यौन जीवनलाई व्याख्या गर्ने प्रयत्न गर्नु मूर्खतापूर्ण कार्य हुनेछ । विविधता यति ठूलो छ की एउटा ...
प्रस्तावित देवानी कानुनमा पत्नीले परपुरुषसँग वा पतिले परस्त्रीसँग यौन सम्बन्ध राखे पतिपत्नीबीच सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । Divorceयस्तै, पतिले पत्नीसँग जबर्जस्ती करणी गरेमा समेत पत्नीले पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गर्नसक्ने प्रस्ताव देवानी कानूनमा गरिएको छ । अाजको गाेरखापत्रमा समाचार छ । पतिले जाँड रक्सीको मातमा पत्नीलाई दुःख दिने र पत्नीको इच्छा नहुँदा ...
ललितपुर केन्द्रविन्दु भएर ४ रेक्टर स्केलको पराकम्प
असोज २१–ललितपुर केन्द्रविन्दु भएर ४ रेक्टर स्केलको पराकम्प गएको छ । आज दिउँसो १ बजे ललितपुरको लेले आसपास केन्द्रविन्दु भएर ४ रेक्टर स्केलको पराकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । वैशाख १२ गते ७ दशमलव ८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएपछि त्यसको पराकम्पन अझै आइरहेको हो । अहिलेसम्म ४ रेक्टर स्केल माथिको ४ सय भन्दा धेरै पराकम्पन गैसकेको केन्द्रले जनाएको छ ...
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रुकुमको डिजिटल नागरिकता बडा पत्रको तयारी अन्तिम चरणमा
असोज २१–जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रुकुमको डिजिटल नागरिकता बडा पत्रको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आज आफ्नै कार्यालयमा रहेको प्रतिक्षालयमा टिभी जडान गरिएको छ । जिल्ला विकास समितिकै लगानीमा राख्न लागिएको डिजिटल नागरिकता बडा पत्रमा राख्ने सामग्रीहरुको तयारी भई रहेको स्थानीय विकास अधिकारी भरतकुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त नागरिक बडा पत्र आउँदो ...
काठमाडौं, जेठ २० – काठमाडौं उपत्यका सहित देशभर गर्मी अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । मौसमविद् शान्ति कँडेलका अनुसार अहिले तत्कालको लागि पानी पार्ने कुनै वायु नभित्रिएकाले गर्मी बढ्ने अनुमान गरिएको हो । उहाँका अनुसार काठमाडौं उपत्यकासहित मध्य र पश्चिम तराइमा गर्मी अझै बढ्नेछ । पूर्वमा मेघ गर्जनसहित क्षणिक वर्षाको संभावना भएकाले त्यहाँ गर्मी नबढ्ने अनुमान छ । सोमबार र मंगलबार ...
दोलखामा ६ दिनमा ५५ वटा पराकम्पन आइतबार बिहान ४.४ रेक्टरको धक्का
३ जेठ,। वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्र बनाएर ७।८ रेक्टरको विनासकारी भूकम्प गएको भोलिपल्टै दोलखा र सिन्धुपाल्चोक केन्द्रविन्दु बनाएर ६।९ रेक्टरको शक्तिशाली पराकम्प गयो । त्यसयता सबैभन्दा बढी धक्का दोलखामै आइरहेका छन् । दोलखा केन्द्रविन्दु भएर वैशाख १२ कै साँझ ६ः२४ मा ४।५ रेक्टरको पराकम्प गगएको थियो । बेलुका ७ ः२१ मै पुन दोलखा केन्द्रविन्दुको ४।९ रेक्टरको पराकम्प गयो ...
४ रेक्टर स्केल मुनिका १० हजारभन्दा धेरै पराकम्पन
जेठ ३ - बैशाख १२ गते बिहान ११ बजेर ५६ मिनेटमा गएको ७ दशमलव ८ रेक्टर स्केलको ठूलो भूकम्पपछि साना ठूला गरेर हजारौ पराकम्पन गैसकेका छन् । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख लोक विजय अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म २ रेक्टर स्केलमाथि र ४ रेक्टर स्केल मुनिका १० हजार भन्दा धेरै पराकम्पन गैसकेका छन् । ४ रेक्टर स्केलकामात्रै २ सय ४० वटा रेकर्ड गरिएको छ । ६ भन्दा माथिका ७ भन्दा मुनिका ५ ...
भूकम्पबाट कहाँ कति क्षति ?
जेठ ३ - बैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या झण्डै साढे ८ हजार पुगेको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार बैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या ८ हजार ३ सय ५६ छ । यसैगरी वैशाख २९ गतेको पराकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १ सय ४१ पुगेको छ । भूकम्पले सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काठमाडौं, धादिङ लगायतका जिल्लामा बढी धनजनको क्षति ...
रातभर एउटा पनि गएन, एकाबिहानै एउटा पराकम्पन
जेठ ३ – शनिबार राती भूकम्पका एउटा पनि पराकम्पन गएन । सधै राती पराकम्पन जाँदा धेरैजना आत्तिने भएपनि गएराती एउटा पनि पराकम्पन नगएपछि धेरैले राम्ररी सुतेको बताएका छन् । रातभरी पराकम्पन नगएपनि आइतबार बिहान ५ बजे एउटा पराकम्प गएको छ । बिहान ५ बजे दोलखा केन्द्रविन्दु भएर ४ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको पराकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ ...
मुख्य सचिव पौडेलको नेतृत्वमा भक्तपुरमा सरसफाई
जेठ २ – मुख्य सचिव लीलामणी पौडेलको नेतृत्वमा शनिबार भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको भक्तपुरका विभिन्न स्थानको सरसफाई गरिएको छ । भूकम्पपछि बागमती सरसफाई रोकेर मुख्य सचिव पौडेलको निर्देशनमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्र भत्किएका संरचनाहरु हटाउने र सरसफाई गर्ने अभियान अन्तर्गत शनिबार दोस्रो हप्ता पनि भक्तपुरको सरसफाई गरिएको हो । गएको शनिबारदेखि सुरु भएको यो अभियान अन्तर्गत ...
History of Earthquake Nepal(Slides)
History of Earthquake ...
प्रहरीको सवार्धिक खोजीमा रहेका मण्डेला फाईरिङ गर्दै भागे
२६ वैशाख, ताप्लेजुङ । प्रहरीको सर्वाधिक खोजीको सुचीमा रहेका ताप्लेजुङका एक व्यक्ति प्रहरी घेरालाई तोड्दै भागेका छन् । प्रहरीको सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेका ताप्लेजुङ सावा दुईका मण्डेला लिम्बू प्रहरीलाई नै गोली प्रहार गर्दै भागेको ताप्लेजुङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक शान्तिराज कोइरालाले जानकारी दिए । फुङलिङबाट एक दिनको पैदल दुरीमा रहेको सावा गाविसमा पुगेको ...
अमेरिका जाने डिभी चिट्ठाको नतिजा आज
सन् २०१६ को डिभी लटरीको नतिजा मंगलबार सार्वजनिक हुँदैछ । डिभी भरेर अमेरिका जान चाहनेले भरेको आवेदनको नतिजा बेलुकीसम्म सार्वजनिक हुने नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । सन् २०१४ को अक्टोबर १ देखि नोभेम्बर ३ सम्ममा आवेदन दिएकाहरुको नतिजा सार्वजनिक हुन लागेको हो । डिभीको नतिजा आधिकारिक वेवसाईट http://www.dvlottery.state.gov/ESC/ मा गएर हेर्न दूतावासले आग्रह गरेको छ । डिभी परे/नपरेको ...
बोनस रकम पाइन्छ भन्ने भ्रममा नपर्न टेलिकमको आग्रह
मोबाइलमा एउटा एसएमएस भाइरल भैरहेको छ । भूकम्प पीडितका लागि सहायता नम्बर २५ जनालाई पठाएमा ३२५ रुपैयाँ बोनस पाइन्छ भनेर । तर, यो गलत यस्ता गलत एसएमएसमा विश्वास गरेर बोनस रकम पाइन्छ भनेर भ्रममा नपर्नुहोला । नेपाल टेलिकमले विज्ञप्ति निकालेर कुनै पनि किसिमको सन्देश प्रवाह गरे वापत बोनस दिने व्यवस्था नगरेको स्पष्ट पारेको छ । नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले मंगलबार ...
निःशुल्क पाइने औषधीको अभाव: कुन कुन औषधी किन्दा पैसा लाग्दैन ?
झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधीको अभाव देखिएको छ । औषधीका लागि बेलैमा टेण्डर नहुँदा ३/४ महिना अघिदेखि औषधीको अभाव देखिएको हो । औषधी खरिदका लागि राष्ट्रिय स्तरको टेण्डर आश्वान गरी ल्याउन कम्तिमा ६ महिना र अन्तराष्ट्रियस्तरको टेण्डरका लागि ९ महिना लाग्ने भएकाले औषधीको अभाव देखिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग पुनर्जागरण महाशाखाका निर्देशक डा. रमेश ...